Dhallinyaro badan oo deggan Rinkeby ayaa dibadda ka jooga nidaamka dalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Abdimalik Osman hogaamiyaha ururka waalidiinta ee xaafada Rinkeby. sawir: Muna Ismail/Sveriges Radio
Dhallinyaro badan oo deggan Rinkeby ayaa dibadda ka jooga nidaamka dalka
La daabacay fredag 25 maj 2018 kl 16.10
Waxaa kor u sii kacaya tirada dhallinyarada ka faqooqan nidaamka dalka ka jira. dhallin-yaro aan hay-san wax camal ah, isla markaana aan ku mashquulsaneyn shaqo.
Xaafadda Rinkeby iyo Tensta oo keliya waxaa lagu qiyaaseyaa iney ku dhaqan yihiin inta u dhexeeysa 800-900 oo dibadda ka jooga nidaamka dalka loogaga dhaqmo, sida laga soo xigtay tira-koobka maamulka xaafadda.
Si haddaba loo hanto dhallin-yarada ayaa xaafadda Rinkeby laga bilaabay mashruuc howl-gal, sida laga soo xigtay idaacadda SVT.
Xiisaha mashruuca ayaa aad u sarreeya. Illaa goortii la bilaabey mashruuca 18-kii bishii abriil ayey booqasho ugu yimaadeen dhallin-yaro tiradoodu gaarsii-san tahay 180.
–Waa wax lagu farxo, iminka waa la ogaaday dhallin-yaradaa, waxaa marka loo baahan yahay in howsha halkeeda laga sii wado sidii loo caawin lahaa, sida ay sheegtay Ulla Thorslund, madaxa hoggaanka xaafadda Rinkeby-Kista.
Xasan waa 20 jir ku dhaqan magaalada Kristianstad. Wuxuu dalka ku yimid keli-nimo, isaga oo 15 jir ah. Halgan badan dabadii wuxuu ku guuleeystay inuu barto xirfad kuna shaqo bilaabo undersköterska waa xirfadda kalkaaliyaha, kalkaaliyaha caafimaad, isagoona uu goolkiisu yahay inuu mustaqbalka barto xirfadda kalkaaliye caafimaad.
Xassan ayaannu kula kullaney magaalada Kristianstad oo dhacda gobolka Skåne, wuxuu sheegay in wax walba u baahan yihiin dadaal iyo gool la hiigsado.
Dhallin-yaradii ey Xasan dalka soo wada galeen ayuu sheegey inay qaarkood ku aflaxeen, qaar kalena ey ka dhaceen sallaankii nolosha oo ey xabsiyo ku jiraan. Dadaalka iyo dhaqdhaqaaqana lagu kala duwan yahay oo aaney dadku isku mid ka ahayn, sida uu sheegay Xasan.